Ny Tompondaka An-tsary: Ny Fitsidihan’i Muhammad Ali Tao Iran Tamin’ny Taona 1993 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2016 2:19 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Ελληνικά, Español, English
Misy dika iray amin'ity lahatsoratra ity navoaka voalohany tao amin'ny Medium.
Tamin'ny fahafetsan'i Muhammad Ali tamin'ny 3 Jona 2016 teo, teo amin'ny faha-74 taonany, nandefa antontan-tsary iray tety anaty tambajotra ny Masoivohom-baovaon'ny Fanjakana Silamo ao Iran (IRNA). Sary nalaina tao Iran tamin'ny 1993 nandritry ny fitsidihana in-telo nataon'ilay Tompondaka Eran-tany amin'ny lalao Ady Totohondry sokajy mavesatra izy ireo.
Nampahatsiahivin'i Rezaian izany tao anatin'ny lahatsorany ho an'ny Washington nanamarika ny fahafatesan'i Ali:
“Namoaka fanambaràna iray nitakiana ny famotsorana anareo i Muhammad Ali,” hoy izy, nidehadehaka.
Fanantenako ny hamaranan'ny governemanta ny fitazonana lavareny an'i Jason Rezaian #FreeJason#AliTweet
Fisaorana lehibe no atolotra ho an'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao noho ireo ezaka fanohanana ho #fahafahan'ijason. Indrindra indrindra ho an'i @MuhammadAli, satria izy no Ilay Tompondaka @RealALI_me